Horboodkii Shalay Iyo Haraatida Maanta W/Q Saalah Ahmed Saalah.
Thursday June, 21 2018 - 05:11:52
Monday December 25, 2017 - 20:52:58 in by Hargeysa Office
Aan inyar ka idhaahdo.! Waxaan u jeedaa ama aan waxoogaa ka hadli doonaa Mucaraddada dhinacyada badan taabanaysa ee baryahan danbe faraha baas inagu haysa. Aan ku horreeyo xisbigayga Waddani ee walina aan u ahay taageeraha, una ahaan doono. Haa waxaa
Aan inyar ka idhaahdo.! Waxaan u jeedaa ama aan waxoogaa ka hadli doonaa Mucaraddada dhinacyada badan taabanaysa ee baryahan danbe faraha baas inagu haysa. Aan ku horreeyo xisbigayga Waddani ee walina aan u ahay taageeraha, una ahaan doono. Haa waxaanu nahay mucaarid. Lakiin, mucaarid nimadu na fari mayso inaanu dhaafno xuduudka oo aanu mijaha u xaabinno waddanka. Haddaanu doonayno inaanu rabash galino maanan aqballeen doorashadii xaaranta ahayd. Balse waxay taasi ku tusinaysaa in dalkan iyo dadkanba aanu lexejeclo fara badan ka leenahay.! Aynu kala fahanno waxaynu mucaarad u nahay iyo cidda aynu mucaarad ku nahay. Kow "Waxaynu mucaarad u nahay inaynu wax hagaajinno ee mucaarid uma nihin inayu wax xumayno."
Waxa kale oo aynu mucaarad ku nahay xukuumadda hadda talada haysa ee mucaarid kuma nihin waddanka aynu leenahay.! Maalmahan dambe waxa aad loo hadal hayay. Mudane Cabdiraxmaan Cirro oo la kulmay Mudane Muuse Biixi Cabdi. Anigu shakhsiyan sax baan u arkaa in la kulmo oo la wada hadlo. Haddaanse taa la samayn sidaa dhiggeedu waa is dil iyo kala aamusnaan taasina ma aha taynu u soconnay Mucaarid iyo Muxaafadba. Waxaynu u tartamaynay kaliyaata anaa dalka u haya qorshe la mahadin doono iyo anaa u haya mid barwaaqo lagu gaadhi doono. Inkastoo loo maray waddooyin xun xun haddana waa illahay mahaddii haddii lays af garto.!! Taas iyada intaas ayaan ka odhanayaa. Aan u imaado dhalinyaradii firfircoonayd ee Xisbigayga Waddani oo aad moodo in badan koodu hadda faraha hore ku taaganyihiin. Horta markaad Xisbiga imanaysay waxaa wanaagsanayd inaad ku soo tala gasho guul iyo guul darraba. Waynu is ogayn oo waxba laysuma reebin. Si kastay ahaydna cid walba way iska ilaabaysaa wixii xumaa ee dhacay waaxanaynu ka dhigaynaa taariikh ina soo dhaaftay wax badanna laga baran doono.!! Haddaba waxaan aad ula yaabanahay iyadoo aan xitaa 2 bilood ka soo wareegin kolkii aad luuqaddaad doonto ku hadlaysay, inaad haddana luuqado Kulmiyaysan nagula hadasho. Waxaad tahay dhalin yaro haddii illahay ku daayo oo aad han leedahay waxaad isa soo hortaagi doontaa Ummaddan aad maanta kolba waxaad doonto la hortaagan tahay.! Haddana su’aashu waxay tahay. Shalay haddaad ku hadaaqaysay Waddani. Maxaa bil ka dib is badalay.? Illeen wali waxba makala miir dillaacine. Anigu shakhsiyan halkaa aragti baan ka qabaa taas oo ah. ” Qofka hadda iska sii huleela iyadoo aan laba lafa gurin waxa khaldanaa iyo waxa saxsanaa ee hadda sii carara inuu marka horaba dan gaara lahaa oo ah. Inuu u soo boob doontay waddanka ee aanu ugu tala galin haba yaraate in uu waddanka wax gashado.” Sababtuna waxay noqonaysaa. Haddaad tahay siyaasi,aqoonyahan,ama indheer garad horta dag dagi mayside waxaad baadhaysaa waxa jira oo dhaba. Kolkaad heshana go’aan kaad doontaad ka gaadhi kartaa.!! Lakiin se Mudane ama Marwo haddaad xil ka haysay Bogcadaha ay ku kulmaan dhalinyaradu sida Facebook iyo wixii la halmaala. Markaa waa saxe galinba waxaad doonto u soo qor dadka. Lakiinse hadaad tahay qof han leh oo meel halkan ka fog wax ka eegaya. Daganaantu waa muhiim. Badanaana qofka waxaa la akhristaa marka uu hadlo inta uu aamusan yahay se garan maysid waxaad ku suurayso. Guntii iyo gaba gabadii waxaan odhanayaa Duca qabayaal. Mustaq bal baad leedihiine Odayashan dharkii dhigtay ee iyagu gabaabsiga ku sii jira. Yay ku hor boodin eee hadda daganaan halagu daro iyo aragti fog.!! Aan u imaado Xisbigii Aanu tartamaynay ee Kulmiye. Waliba aan u isii tago dadkii cabaadka iyo qayladu ay uga dhamaadeen siduu u guulaysan lahaa xisbiga Kulmiye. Way guulaysteen hasa yeeshee wali gunuus ba’an baa jira. Laba qolaba way mahadsanyihiin. Qolodii qurba joogta ahayd ee intay Muuse Af ,Addin,Eex iyo Itaalba ku dareen ee soo saaray dibna diyaaradaa u raacay way mahadsan yihiin. !! Qoladii kale iyaguna aragtida ama Barnamijka xisbiga ku taageersanayd ee iyana aragtiduun la garab taagnaa way mahadsanyihiin.!! Hasa yeeshee laba qolo ayaa iyagu eeday fartooda. Dhexdana ka qaniinay oo ilaa hadda ka laa laada.!! Kow waa qoladii kulmiye u dooratay Qabiilka ee marada iyo miirkaba u tuuray una dilay sharaftooda iyo shakhsinimadooda oo iyana aan waxba is tarin isagana wax taray. Haa way soo saareen oo cir iyo dhulba u mareen hasa yeeshee yagaa afkooda isku xidhay oo yidhi Muuse waa nin go’aan adag.!!! Qolada kalana waa qolo wasiiraaa oo quud daraynayay inuu muuse abaal uga dhigo. Inuu mar labaad soo celiyo iyaguna hadda way kadab go’een oo adhaxda ayay ka jabeen Muusana wuxuu ku noqday ninkii mayalka adkaa ee ay afkooda ka caddaynayeen.!! Anagu haddaanu nahay mucaaridkii waanu ognahay in ay noo iman doonan qolo koon koonsan oo Kulmiye soo caydhiyay isla afkii ay ku amaanayeena ku caayaya, se anagu xukumi mayno balse Bulshada dhankeeda calaamad baa saaran.!! Muuse wuu qaatay go’aan kii ay iyaguba markhaatiga ka ahaayeen lakiinse waxaad moodaa in hadda Jab hado kulmiyaysani samaysmayaan. Wuxuu yidho ninkii jiray "Booraan ha qodin haddaad qodana ha dheeryn ku dhici doontana ma odide.!!!
Anigu se hadda waxaan kaga baxayaa tixdan yar. Oo aan ugu tala galay walalagayga firxadka iyo fadh fadhu ka dhamatay.!! Miyaad khaldanayd darraad Markaad adigu u lahayd Markhaati waxaan ka ahay Nin mayal adag oo wax tara Ayaad madax wayne tahay. Mujaahid waxaanad tahay Masuuliyadiyo xilkaba Yaqaana halkay martoo Midayn kara shacabka badan.!! Nimankii ku hadraayay ee ku hadaaqayay intaa iyo in kabadan ka aqbali mayno jabhad baanu samaynaynaa aanu Muuse iskaga caabinno. Ee halkiina ku raali ahaada ayaanu leenahay.!!!
W/Q Saalah Ahmed Saalah